China Emergency Ration ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စွမ်းအင်မြင့်ဘား > MRE Food High Energy Bar > အရေးပေါ် ခွဲတမ်း
အရေးပေါ်ခွဲတမ်းသည် ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါဝင်သည့် MRE အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဘီစကွတ်များ၊ ဆော့စ်အမဲသားနှင့် ကြွပ်ကြွပ်ခြောက်သော မုန်လာဥနီတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းအား စစ်ဘက်တိုက်ခိုက်ရေးရိက္ခာ၊ အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းအရန်၊ ပြင်ပအားကစားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊ အပန်းဖြေအစားအစာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ တာရှည်ခံခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းတို့သည် အရေးပေါ်ရိက္ခာ၏ အားသာချက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။
Emergency ration ၏ ရှင်းလင်းချက်
အရေးပေါ်ခွဲတမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒါဆို MRE အစားအစာက ဘာပါလဲ၊ ဘာကြောင့် အရေးပေါ်ခွဲတမ်းအဖြစ် သုံးလို့ရလဲ၊ စက်ရုံကရော ဘယ်လိုလဲ။ ဒီစာပိုဒ်မှာ ဖတ်လို့ရတယ်။
1. စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 310g
2. Menu အကြောင်းအရာ- 2x125g multivitamin နှင့် သတ္တုဓာတ်များ စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဘီစကွတ်များ၊
ငံပြာရည် အမဲသား 40 ဂရမ်၊
မုန်လာဥခြောက် 20 ဂရမ်
3. သိုလှောင်မှုသက်တမ်း- 36 လ (အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ပုံမှန်အပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပါ)
4. ထုပ်ပိုးခြင်း- သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားအိတ်ထဲတွင် ထည့်ထားသော လေဟာနယ်အားလုံး။
စွမ်းအင်(KJ) 5235 (1251Kcal)
MRE ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။
MRE (အစာ၊ အသင့်စားတစ်ဦးချင်း)၊ စာသားအရ၊ ယခုချက်ချင်းစားနိုင်သော အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စစ်သားများသည် တိုက်ပွဲဖြစ်သည့်အခါ စားရန် အစားအစာချက်ပြုတ်ရန် အားလပ်ချိန်မရှိသည့်အပြင် ဖြေရှင်းရန်အတွက် သို့မဟုတ် ဝင်ရိုးစွန်းတွင် တောထဲတွင် ရှိနေနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့ ဗိုက်ပြည့်စေရန် ထိုကဲ့သို့ ရိက္ခာများ လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် MRE အစားအစာသည် စစ်သည်များသာမက သာမန်လူများအတွက်ပါ အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် လက်ငင်းအစားအစာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အရေးပေါ် ရိက္ခာအဖြစ် အဘယ်ကြောင့် သုံးနိုင်သနည်း။
1. ဤအရေးပေါ်ခွဲတမ်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော သိုလှောင်မှုသက်တမ်းမှာ3နှစ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းတွင် စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဘီစကွတ်များပါဝင်ပြီး နှစ် 20 သက်တမ်းရှိသည်။
2. ဤအရေးပေါ်ခွဲတမ်းသည် သေးငယ်ပြီး အမြောက်အမြားသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန် လေဟာနယ်အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားထုပ်ပိုးမှုကို အသုံးပြုသည်။
3. ဤအရေးပေါ် ခွဲတမ်း၏ ချက်ပြုတ်နည်းများသည် အသားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်ပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အာဟာရလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော အသားနှင့် အသီးအနှံများ ကောင်းစွာ မျှတပါသည်။
နှစ် 60 ကျော်စုဆောင်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ခေတ်မီစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတစ်ခုရှိပြီး ၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် "စစ်တပ်အရည်အသွေး၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနှင့် မျှဝေခြင်း" ၏ ကော်ပိုရိတ်မစ်ရှင်ကို အမြဲတမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တပ်မတော်၏လက်နက်ခဲယမ်းအစားအစာသုတေသနဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရာနှင့်ချီသောစစ်တပ်အစားအစာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်လွတ်လပ်စွာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုဆုများစွာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ တပ်မတော်အတွက် စည်သွတ်အစားအစာ၊ ဖိသိပ်ထားသော အစာခြောက်၊ ကိုယ်တိုင်အပူပေးစာ၊ အစားအစာ စသည်တို့ကို တန်ချိန် ၃၆၅,၀၀၀ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်နှင့် ပြည်တွင်းရောင်းချမှုအတွက် ထုတ်ကုန်တန်ချိန် ၁၅၈,၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
hot Tags:: အရေးပေါ်ခွဲတမ်း၊ တရုတ်၊ လက်ကား၊ ပေးသွင်းသူများ၊ အသစ်ဆုံး၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ HACCP